Kuthuleke endlini kaNdlovu - I-Airbnb
Kuthuleke endlini kaNdlovu
Dauphin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, i-France
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Cecile
U-Cecile Ungumbungazi ovelele
Indlu yedolobhana elidala edolobhaneni lakudala laseDauphin, indawo eyibanga letshe ukusuka ezinqabeni zenqaba kanye ne-panorama yayo enhle kakhulu. Ngiphakamisa ukuthi wabelane ngendlu yami namakati ami angu-2, ngobulula futhi ujabulele ukuzola enhliziyweni yalesi sigodi esihle. Leli gumbi lilungele umuntu oyedwa noma umbhangqwana ongenazo izingane. Amathuba okudla kwasekuseni nesidlo sakusihlwa, okungcono kakhulu ngemikhiqizo yasendaweni, yemvelo kanye nemifino (okuzokhonjiswa emlayezo wakho wokubhuka).
Ifakwe ideski, ukufinyelela kwe-WIFI yamahhala, indawo yokusebenza ephelele ehlanganisa isikrini, ikhibhodi, futhi inokuthula ngokuphelele, leli gumbi lilungele ukusebenza ngocingo. Kodwa ungayijabulela njengendawo yokuphumula ngemva kosuku lokuqwala izintaba noma uhambo lokuvakasha kulesi sifunda esihle. Ukuze uthole induduzo yakho, ungajabulela phakathi kwezikhala ezabelwana ngazo, ithala elihle elinomthunzi kanye nekhishi.
Itholakala eLuberon Regional Natural Park phakathi kweManosque neForcalquier, iDauphin ikuvumela ukuthi uhlole iProvence usuka entabeni yaseLure uye eVerdon Gorges, udlula esigodini saseDurance uye esigodini sase-Apt. Kodwa futhi unokuhamba ngezinyawo okuhle kakhulu ongakwenza ngokuqondile usekhaya.
Amathuba okudla kwasekuseni ngo-€ 7 umuntu ngamunye (azokhokhwa ngqo esizeni). Ngingaphinde ngikunikeze isidlo sakusihlwa nge-12 €. Ungangabazi ukungitshela ngakho uma ubhalisa.
UCecile Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Dauphin namaphethelo